Kopi ye Windows ndeyechokwadi chete kana yakagadziriswa uchishandisa kiyi inoshanda. Paunotenga Windows Keys kubva kuMicrosoft webhusaiti kana kuitora kubva kuOEMs, unogona kuva nechokwadi chekuti ndezvechokwadi. Asi iwe unofanirwa kuve wakangwarira kana iwe ukavatenga kubva kune echitatu-bato mawebhusaiti. Mibvunzo. Ndozvazviriwo Windows 10 makiyi aunotenga kubva kune imwe saiti saAmazon, nezvimwewo, zviri pamutemo kana zviri pamutemo? Izvo zvinoenderana!
Dambudziko guru rekuti sei vatengi vazhinji vachiwana rezinesi, iro rinotengeswa nemutengo wakaderera kwazvo, gare gare rinozoshaya basa nekuti nderekuti dzinogona kunge dzichiitwa kiyi dzechigadzirwa kana makiyi eLayisensi. Mune ino posvo, isu tinokurudzira nzira dzinoverengeka dzekutarisa kana yako Windows Chigadzirwa Rezinesi Kiyi ndeyechokwadi kana Legit.
Maitiro ekutarisa kana yangu Windows Kiyi ndeyechokwadi
Kune mhando dzakasiyana dzemakiyi. Windows 10 makiyi ayo mutengi anotenga zvakananga, anowanzo shanda kusvikira hupenyu hwemuchina (chitoro uye OEM).
Pane imwezve mhando dzemakiyi: Vhezheni License (Mak uye KMS. Enterprise kana makambani makuru anotenga makiyi aya kumutsa makomputa muhuwandu. Ini
vaona mishumo apo vazhinji vevatengesi vechitatu vakatengesa makiyi aya kune vatengi pamutengo unodhura. Makiyi aya anogona kuvhurwa pamakomputa akawanda kana kushanda kwemwedzi yakati wandei.
Zvakanaka kuti usatenge kiyi kubva kune mumwe munhu asina kubvumidzwa kutengesa Windows 10 makiyi. Uye kana mumwe munhu akatenderwa, uye ivo vachipa mutengo wakaderera, ita shuwa kuti uvabvunze kana kiyi ichashanda kunyangwe mushure mekudzoserwa.
Pane zviitiko zviviri-
Kutanga iwe uine kiyi, uye iwe unoda kutarisa usati wanyatsoishandisa.
Chepiri ndipo pawakamboishandisa, asi zvakadaro, kuda kuongorora.
Ngatitarisei kuti ungawana sei kana yako Windows Kiyi ndeyechokwadi.
1] Shandisa zvishandiso zvePID
Tine zvishandiso zviviri pano - The Ekupedzisira PID Cheki uye Microsoft PID Cheki - zvaunogona kushandisa kuti uone kana Windows 10 kiyi ndeyechokwadi. Nepo iyo yekupedzisira PID yekuongorora inoshanda kune ese mavhesi apfuura Windows 10, Microsoft PID yekuongorora inoshanda Windows 10 uye Server 2016 chete.
Dhawunirodha Microsoft PID Checker kubva pano kana Ultimate PID Checker kubva pano. Kana kiyi isiri yechokwadi kana kuti isiri iyo, software yacho inokupa mhinduro kumashure. Inogona zvakare kushandiswa kutarisa iyo Mak kuverenga.
2] Tarisa Windows Kiyi ine Software Rezinesi Yekushandisa Mushandisi
Vhura Command Prompt pane yakakwirira ropafadzo.Execute inotevera kuraira:
Iyo "dli" paramende inoratidza iripo rezinesi ruzivo neyakagadziriswa mamiriro.
Mhedzisiro yacho ichasanganisira iyo mhando yekiyi (Retail, OEM, MAK, kana KMS kiyi. Kana iyo rezinesi ichiti "Inorambidzwa", saka hauna dambudziko. Kana paine chero chimwe chinhu, kiyi yako haina musoro. Zvakare kana ukaona mhando seMAK kana KMS, uye uri mutengi, unofanirwa kubatana nemunhu wawakatenga kiyi kwaari, uye tora kiyi yeRetail.
3] Tarisa Zvirongwa & Kumisikidza Mamiriro
Kune mashoma nzira dzinokurumidza dzekutarisa kana kiyi iwe yawakashandisa mune zvisiri pamutemo. Chinhu chekutanga iwe unofanirwa kuvhura Zvirongwa, uye woona kana paine yambiro nezve kuita. Kana izvo zvisipo, enda kuKuvandudza & Chengetedzo> Kumisikidza uye tarisa chimiro. Kana paine kukanganisa uye zvikasadaro Windows yakaitwa, une dambudziko. Muchidimbu iyo Windows 10 makiyi kwete pamutemo kana pamutemo.
Tiudze kana izvi zvakubatsira kuona kana Windows 10 kiyi ndeyechokwadi kana kwete.
2 Nzira dzekutarisa Windows 11 Kumisikidza Mamiriro